↑ မောင်ဇေယျာ (၂၀၁၀၊ မတ်လ). မြန်မာလူကျော် ၁၀၀ (ပထမအုပ်). UNITY စာပေ။
၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၃:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။